तपाईको आजको राशीफल कस्ताे छ ? - नेपालबहस
तपाईको आजको राशीफल कस्ताे छ ?
१२ फागुण २०७७ | ६:००:२७ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७७ साल फाल्गुन १२ गते । बुधबार । इ.स.२०२१ फेब्रुवरी २४ तारिक । शकसंवत् १९४२ । प्रमादी संवत्सर । उत्तरायण । शिशिर ऋतु । नेपाल संवत् ११४१ । माघ शुक्लपक्ष । तिथी– द्वादशी,१५ बजेर ५६ मिनेट उप्रान्त त्रयोदशी । नक्षत्र– पुनर्वसु,११ बजेर २६ मिनेट उप्रान्त तिष्य । योग–सौभाग्य,२५ बजेर ५६ मिनेट उप्रान्त शोभन । करण–बालव,१५ बजेर ५६ मिनेट उप्रान्त कौलव,२७ बजेर ५८ मिनेट उप्रान्त तैतिल । आनन्दादिमा–गद योग । चन्द्रराशि–कर्कट । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर ३५ मिनेटमा,सूर्यास्त १८ बजेर ०० मिनेटमा । दिनमान २८ घडी ३१ पला ।
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ):- मायाप्रेममा बिश्वास सिर्जना हुनेछ भने घर परिवारमा आमासँग मनमुटाव उत्पन्न हुनेछ । अन्य काममा व्यस्त हुँदा पढाईलेखाई कमजोर रहनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा सहभागी हुनेहरुले जनतासँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुहोला । स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला छाती सम्बन्धी समस्या आउने तथा खर्च बढ्ने योग रहेकोछ । तरपनि कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा समय लगानी गरी भनेजस्तो आम्दानी गर्न सकिने छ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो):- गलत लेखाई अथवा गलत बुझाईलो आफ्नो साख गिर्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । छोटो तथा रमाईलो यात्राको तय गर्न सकिने भएपनि वढि नै उत्साहित हुन खोज्दा नराम्रो घट्न घट्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । व्यापार व्यवसायमा लगानी गरे पनि नाफा कमाउन बढी नै समय खर्चनु पर्नेछ । मायाप्रेममा मनमुटाव सिर्जना हुने भएपनि अन्तत एक अर्कालाई विश्वास गर्दै अगाडी बढ्न सकिनेछ ।
मिथुन ( का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) :- तपाईको कामको धेरैले प्रशंसा गर्नेछन् भने बिशिष्ट व्यक्तिहरुबाट सम्मानित हुने ग्रहयोग रहेको छ । तार्किक क्षमतामा बृद्धि भएर जानेछ भने सम्मानका साथ आम्दानी बढाउन सकिने छ । गाएन तथा संगितको क्षेत्रमा लागी नाम कमाउनेहरुका लागी नया नयाँ अवसर आउनेछ । पारिवारिक माहोलमा जमघट भई मिठो मसिनो खाने अवसर जुर्नेछ । प्रेमले सकारात्मक मोठ लिनेछ भने कुटुम्ब सँगको सम्बन्ध सुदृड भएर जानेछ ।
कर्कट ( ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो):- समयमा कामहरु सम्पन्न हुने तथा अरुको काम गरी नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिने छ । अध्ययन तथा अध्यापनको क्षेत्रमा थोरै समय लगानी गर्दापनि सकारात्मक नतिजा हात लागी हुने योग रहेको छ । तपाईको लुवाई ख्वाई देखेर सबैजना मोहित हुनेछन् । मायाप्रेममा आफ्नो मान्छेलाई आफ्नै वरिपरि देख्न पाउदा मन प्रशन्न हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा प्रसस्त नाँफा कमाउन सकिनेछ भने लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकिनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे):- कर्म क्षेत्रमा आउने विवादले आत्मसम्मानमा कमिको महशुस हुनेछ । आकस्मिक खर्च बढ्ने तथा आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य समस्या आउने भएपनि दैनिक काम गर्न गाह्रो हुने छैन । साथिभाई तथा आफन्तहरुको भेटघाटले नयाँ काम गर्ने अवसर आएपनि फाईदाको लागी अली बढि मेहनेत गर्नुपर्नेछ । तरपनि लामो दुरिको विदेश यात्राको तय हुनेछ भने विदेशी सामानको व्यापार व्यवसाय बढेर जानेछ ।
कन्या ( टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो ) :- समय मध्यम रहेकोले व्यापारमा लगानी गर्नको लागी केही समय पर्खनु नै राम्रो हुनेछ । दाजुभाई तथा आफन्तबाट भने जस्तो सहयोग नहुने हुनाले काम गर्न नसके जस्तो हुनेछ । सत्रु,मुद्दा मामिला तथा अन्य झन्झटबाट मुक्ती मिल्ने समय नरहेकोले ख्याल गर्नुहोला । मायाप्रेममा मनमुटाव बढ्न सक्छ । सवारी साधन तथा अन्य भौतिक सम्पतिहरु प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला । पढाईलेखाई तपाई आफ्नै कमजोरिले बिग्रनेछ ।
तुला ( रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते ) :- जानकारीको अभावले कामहरु बिग्रनेछ भने आलोचनाको शिकार होईनेछ । आर्थिक पक्ष कमजोर रहने तथा यही बेलामा व्यापार व्यवसायमा मन्दी आउनेछ । आम्दानी भन्दा खर्च अधिक हुने हुनाले रुपैया पैसाको व्यावस्थापन गर्न गाह्रो पर्नेछ । पढ्ने लेख्ने काममा खासै मन नजादा अरुभन्दा पछी परिनेछ । मायाप्रेममा अबिश्वास बढ्ने योग रहेको छ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको काम गर्न नसक्दा मान सम्मान पाउने योग टरेर जानेछ ।
बृश्चिक ( तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू ) :- भाग्य तथा समयले साथ दिने हुदा आटेको तथा ताकेको काम सजिलै बन्नेछन् । सामाजिक तथा सरकारि क्षेत्रमा रहेर जनतको काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । खोज मुलक काममा सफलता मिल्नेछ भने अध्ययनमा रुची बढ्नेछ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागी दिन राम्रो रहेकोछ । शिक्षा तथा धार्मिक क्षेत्रसँग सम्बन्धीत कामबाट मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ भने धार्मिक यात्रा हुनेछ ।
धनु ( ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे ): – सवारीसाधनको प्रयोग गर्दा वा चलाउदा ध्यान दिनुहोला अप्रिय घटना नघट्ला भन्न सकिन्न । दिनभर व्यास्त भएपनि न्यून पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउनु पर्दा मन खिन्न हुनेछ । खानपिन तथा बाहिरी वातावरणको ख्याल गर्नुहोला । पढाईलेखाईमा समय दिन नसक्दा अरुभन्दा पछी परिने चिन्ताले सताउनेछ । व्यापार व्यवसायमा समय दिन नसक्दा घाटा लाग्ने योग रहेको छ भने आम्दानिका स्रोतहरु साघुरिनेछन् । माया प्रेममा धोका हुनेछ भने दाम्पत्य जीवनमा घटपट आउनेछ ।
मकर ( भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) :- कडा परिश्रम गर्दा पनि प्रतिफल न्यून आउने हुनाले मन खिन्न हुनेछ । व्यापारमा घाटा लाग्ने योग रहेकोछ भने व्यापारको शिलशिलामा गरिने यात्रा निअर्थक हुनेछ । सवारीसाधन तथा बिलाशी बस्तुको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला समय मध्यम रहेको छ । आत्मबल तथा सम्यम्मता गुमाउदा आफैलाई घाटा लाग्न सक्छ । मायाप्रेममा एक अर्कालाई अबिश्वास गर्नाले नचाहादा नचाहादै टाडिनु पर्ने बाध्यता आउन सक्छ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा ):- राजनीतिक तथा सामाजिक प्रभाव कमजोर रहने हुनाले तपाईको प्रतिस्पर्धीको रुपमा अरुनै देखा पर्नेछन् । खानपानमा ध्यान नदिदा स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । आउनु पर्ने रुपैया पैसा नआउने तथा आफन्तलाई दिएको धनले शत्रुता बढाउनेछ । धन सम्पती हराउने तथा चोरी हुने हुनाले यात्रा गर्दा ख्याल गर्नुहोला । प्रेममा अबिश्वास बढ्ने योग रहेकोछ भने मामा तथा आफन्तसँग विवाद बढ्नेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची):-अध्ययनमा प्रशस्त समय दिन सकिनेछ भने नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । तपाईको ईमान्दारिताको कदर सबैले गर्नेछन् । बन्द व्यापार फस्टाएर जाने हुनाले मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । अप्ठ्यारा तथा असजिला परिस्थितिलाई सहजै बुद्धिमता पुर्वक निराकरण गर्न सकिनेछ । प्रेममा सामिप्यता बढ्ने तथा उपाहार प्राप्तीको योग रहेकोछ । सन्तान तथा आफन्तबाट सहयोग रहने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । तपाईको दिन शुभ रहोस् ।
तपाईकाे साप्ताहिक राशीफल [ फागुन ०२ गते आइतबारदेखि ०८ गते शनिबारसम्म ] २ हप्ता पहिले
कस्तो छ तपाईको फागुन महिनाको राशीफल ? २ हप्ता पहिले
विद्यालयको आफ्नै छात्रावास भवन बन्ने १ मिनेट पहिले
बैकिङ कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ २ मिनेट पहिले
दुई महिलालाई टर्की पुर्‍याई बेचबिखन गर्ने २ जना पक्राउ ५ मिनेट पहिले
क्यान्भासमा पोतीएका महजोडी ७ मिनेट पहिले
गैंडा मारी खाग बिक्री गरेको मुद्दाका फरार ३ जना पक्राउ ९ मिनेट पहिले
लैंगिक उत्तरदायी अनुसन्धान तथा संचारका सीप प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सम्पन्न १३ मिनेट पहिले
सञ्चारकर्मी बिष्णु ठकुरीको मन फाटेपछी २१ मिनेट पहिले
पार्टीको आधिकारिक धारणा नेताहरूबाट बुझ्‍न श्रेष्ठकाे आग्रह २९ मिनेट पहिले
कालीप्रसाद बाँस्कोटाको ‘मैना’मा गरिमा शर्मा (भिडियो) ३१ मिनेट पहिले
नेपाली बजारमा ओरालो लाग्यो सुनको मूल्य ३३ मिनेट पहिले
दक्षिण कोरियामा कोरोना खोप नेपालीमा खुशी ५१ मिनेट पहिले
खपतमा कमी आएपछि घट्यो चिज उत्पादन ५५ मिनेट पहिले
फोहरलाई मोहर बनाउने अभियानमा नगरपालिका ६० मिनेट पहिले
वडा कार्यालयको नयाँ भवन बन्ने १ घण्टा पहिले
ओलीको भविष्य अध्याँरो सुरूङमा: राजेन्द्र श्रेष्ठ १९ घण्टा पहिले
नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठक सम्पन्न ५ घण्टा पहिले
एम्बुलेन्स पाउदा स्थानीयवासी उत्साहित २३ घण्टा पहिले
९६ वर्षीय डा दासलाई हेमबहादुर मल्ल सम्मान १९ घण्टा पहिले
मास्टरसेफ सन्तोष साह काठमाडौंमा २२ घण्टा पहिले
बिहीवार चन्द्रागिरी हिल्सको शेयरमूल्य सर्वाधिक बढ्यो, निफ्राको के भयो ? २१ घण्टा पहिले
कलाकार पल शाहविरुद्ध धरान प्रहरी कार्यालयमा उजुरी २ घण्टा पहिले
राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रूपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै, ब्याज कति ? ४ दिन पहिले
अमेरिकी वायुसेवाका २४ वटा बोइङ विमान ग्राउन्डेड ४ दिन पहिले
सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा ५ दिन पहिले
प्रचण्ड–माधव समूहकाे काठमाडौंमा विजय जुलुस २ दिन पहिले
विप्लवले वार्तामा आउँछु भन्दा केही तत्वलाई टाउको दुख्याे : ओली ५ दिन पहिले
मातृभाषा दिवसमा जनजाति साहित्यकार महासङ्घ गठन २ दिन पहिले
नेपालकै नमूना प्राणी उद्यान निर्माण शुरु १ हप्ता पहिले
पशुपतिनाथको अपमान गरेको भन्दै नेकपा नेताको पुतला दहन १ हप्ता पहिले
क्लबमा आफूलाई कुटेको भन्दै नायिका कार्कीले दिइन् प्रहरीमा उजुरी ३ हप्ता पहिले
पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै टिकटक पार्क ४ हप्ता पहिले
आत्मनिर्भर बन्न किसान फलफूल खेतीमा आकर्षित ३ हप्ता पहिले
अंग्रेजी सुधार गर्ने अनौठो १०० वटा तरिकाहरु – भाग ६ २ वर्ष पहिले
युरोडिस फोटो अवार्डमा लामिछानेले खिचेको फोटो १ हप्ता पहिले
झण्डा जलाउने दोर्जे तामाङसहित ९ जना पक्राउ, थप अनुसन्धान शुरु ६ महिना पहिले
राष्ट्र बैंकमा ५ कार्यकारी निर्देशकको पदावधि समाप्त, नियमन विभागमा जान रस्साकस्सी चल्दै २ वर्ष पहिले